Football Khabar » विश्वकप फुटबलमा मेस्सी र रोनाल्डोको त्यो कीर्तिमान : कसले तोड्ला ?
विश्वकप फुटबलमा मेस्सी र रोनाल्डोको त्यो कीर्तिमान : कसले तोड्ला ?
विश्व फुटबलका दुई सुपरस्टार अर्जेन्टिनाका लिओनल मेस्सी र पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डोबीच क्लब फुटबलमा मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि चर्को प्रतिस्पर्धा छ । हाल ३५ वर्ष पुगेका रोनाल्डो र ३२ वर्षका पुगेका मेस्सीले एकैपटक सन् २००६ को फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएका थिए, जुन जर्मनीमा भएको थियो । तर, यी दुवै खेलाडीले आजसम्म विश्वकपको उपाधि छुन भने पाएका छैनन् ।
पहिलो विश्वकप खेलेयता यी दुवै खेलाडीले हरेक विश्वकप चार–चार पटक खेलिसकेका छन् । तर, समग्र गोल संख्यामा कीर्तिमानी यी दुवै खेलाडीले विश्वकप प्रतियोगितामा भने उति धेरै गोल गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूको खेल संख्या, गोल संख्या र असिस्ट संख्या औसतमा उस्तै देखिन्छ । कोही एकजना निकै अघि र अर्को पछिको अवस्थामा छैनन् ।
साथै, यी दुई खेलाडीले विश्वकप प्रतियोगितामा जितेको व्यक्तिगत अवार्ड औसतमा बराबरी छ । यी दुवै खेलाडीका नाममा विश्वकपको मञ्चामा एक रेकर्ड छ, त्यो हो सबैभन्दा धेरैपटक ‘म्यान अफ् द म्याच’ खेलाडीको अवार्ड । चार–चारपटक विश्वकप खेल्दा रोनाल्डो र मेस्सी दुवैले समान ६–६ पटक व्यक्तिगत रूपमा ‘म्यान अफ् द म्याच’ अवार्ड जितेका छन्, जुन अन्य कुनै पनि खेलाडीले जितेको छैन । विश्वकपको इतिहासमा ६ पटक यो अवार्ड जित्ने रोनाल्डो र मेस्सी मात्रै हुन् ।
तर, मेस्सीले सन् २०१४ को विश्वकपमा उत्कृष्ट खेलाडीको अवार्ड जितेका थिए, जुन निकै विवादित पनि बनेको थियो । मेस्सीको टिम अर्जेन्टिना फाइनलमा जर्मनीसँग १–० ले पराजित भए पनि मेस्सीलाई प्रतियोगिताकै सर्वोत्कृष्ट खेलाडीको अवार्ड दिइएको थियो । सो संस्करणमा उनले कूल ७ खेल खेल्दै ४ गोल गर्दा १ असिस्ट गरेका थिए ।
तर, सो संस्करणमा कोलम्बियाका हामेस रोड्रिग्वेजलाई गोल्डेन बलको प्रमुख दाबेदार मानिएको थियो, जसले धेरै गोल गरेर गोल्डेन बुट पनि जितेका थिए । तर, फाइनलसम्म पुगेपछि मेस्सीले सो अवार्ड जित्दा आयोजक फिफा र मेस्सी स्वयंले पनि चर्को आलोचना खेपेका थिए । धेरैले रोड्रिग्वेजको गोल्डेन बल मेस्सीले ‘लुटेको’ भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
विश्वकपको मञ्चमा सबैभन्दा धेरै ‘म्यान अफ् द म्याच’को अवार्ड जित्ने रोनाल्डो र मेस्सीको रेकर्ड निकट भविष्यमा जोकोहीले तोड्न सक्छ । तर, रोनाल्डो र मेस्सीले अझै एक विश्वकप खेल्ने सम्भावना रहेकाले उनीहरूले यो संख्या अझै बढाउन सक्नेछन् ।
हालसम्म विश्वकपमा रोनाल्डोले कूल १७ खेल खेल्दा ७ गोल गरेर ४ गोलमा असिस्ट गरेका छन् भने मेस्सीले १९ खेल खेल्दा ६ गोल गरेर ५ गोलमा असिस्ट गरेका छन् । सिंगो अन्तर्राष्ट्रिय करिअरमा रोनाल्डोको ९९ गोल छ भने मेस्सीको ७० गोल मात्रै छ ।
प्रकाशित मिति १८ असार २०७७, बिहीबार १८:५०